नेपालको संचार – newsanchar.com | प्रचण्डले बारम्बार किन दिन्छन् माओवादी विघटनको धम्की ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति चर्को असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा नेकपा एकता बदर गरिदिए ब्युँतिएको पार्टीलाई चुनाव केन्द्रित गरी बलियो बनाउने चाहनालाई अन्य नेताले ‘सहयोग नगरेको’ उनको गुनासो छ ।
यतिसम्म कि आइतबार भएको एक कार्यक्रममा त दाहालले पार्टीको आकार खुम्चिँदै गएको र दुई–चार वर्षमा एक्लै भइने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको समेत खुलासा गरे । निकट नेताहरूका अनुसार दाहालको यो अभिव्यक्ति पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूतर्फ लक्षित थियो । यति मात्र होइन, यही असन्तुष्टिका कारण दाहालले सार्वजनिक रूपमै पार्टी विघटन गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
नेता–कार्यकर्तामाथि असन्तुष्ट दाहालले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो कमजोरी र भूमिकाबारे भने केही बोलेका छैनन् । निरन्तर ३२ वर्षसम्म पार्टीको एकोहोरो नेतृत्व गरेका उनले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी भरपर्दो युवा पुस्ता किन बनाउन सकेनन् ? यो बीचमा पार्टीको आरोहको जस लिएर अवरोहको अपजस अरूलाई भिराउन खोज्दा राजनीतिक जिम्मेवारी कसरी पूरा हुन्छ ? माओवादीभित्रै पनि यस्तै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । २०४६ सालदेखि १० वर्ष महामन्त्री र त्यसपछि २२ वर्ष अध्यक्षका रूपमा उनी पार्टीको शीर्षस्थ स्थानमा छन् । नेपालको समकालीन मूलधारको राजनीतिमा यसरी पार्टीको एकछत्र नेतृत्व गर्ने नेता अरू कोही छैन । कांग्रेसका देउवा अथवा एमालेका केपी ओलीले पार्टी नेतृत्वका रूपमा पहिलो कार्यकाल मात्रै पूरा गर्दै छन् ।
माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भन्छन् । माओवादीभित्र खुलेर बहस गर्ने संस्कार पनि छैन । जो अध्यक्ष दाहालको आलोचना गर्न सक्थे, उनीहरू पार्टीबाटै किनारा लागे, जसले हो मा हो मिलाउँछन्, उनीहरूमात्र पार्टीभित्र टिक्न सक्ने वातावरण स्वयं दाहालले बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीको बुझाइमा पनि दाहालले आफ्नो जीवन कर्मलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । ‘कहाँ बेठीक गरें, कस्ता–कस्ता पात्रलाई कस्तो व्यवहार गरें, ती पात्रबाट पार्टीलाई के–कति फाइदा भयो भनेर अध्यक्षले फर्केर हेर्न थाल्नुपर्यो,’ उनी भन्छन् ।
‘संविधान लेखनदेखि केपी ओलीसँगको एकता र त्यो भंग हुने बेलासम्म व्यवहारवादी राजनीतिको नाममा दाहिने खुट्टा उचालियो । अब देब्रे खुट्टाको पालो आएको छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ । किनभने दाहिने, देब्रे दुवै खुट्टा चालेर मात्रै यात्रा हुन सक्छ भन्ने मान्यता अध्यक्षले राखेको देखिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईं भन्छन्, ‘दोस्रो, उहाँले जुन राजनीतिक गतिमा सोच्नु हुन्छ, त्यो गतिमा पार्टी, संगठन परिचालित नभएको भएर पनि त्यसरी बोल्नुभएको होला ।’
पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन हाल नेतृत्व तहमा रहेकाबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाएकामा दाहाल सशंकित हुन थालेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओले जीवनको अन्तिम कालमा एक्लिएको दृष्टान्त पेस गर्दै आइतबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘१/२ वर्षपछि माओ जस्तै एक्लै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । माओले भनेजस्तै ‘म एक्लो हुँ’ भन्नुपर्ने हो कि । कहिलेकाहीँ मेरो दिमागमा आउँछ ।’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आउनुको पछाडि दुई कारण देख्छन् । ‘आफूभित्र पलाएको असन्तुष्टि नै कारण होला किनभने अर्काको पार्टी नोक्सान भए पनि आफ्नो पार्टी विकसित, विस्तार भएको छैन । विस्तार गर्न कार्यकर्तालाई उक्साएको पनि होला,’ श्रेष्ठले भने, ‘दोस्रो, पार्टीमा सबैका सबै पदका लोभी, सबैलाई मन्त्री चाहिने । सबै पैसाको पछाडि मात्रै कुद्ने रोग पार्टीमा देखिएको छ । त्यो रोगबाट प्रचण्ड पनि आजित भएका होलान् ।’
पार्टी विघटनको अभिव्यक्ति आए पनि दाहालले सजिलै विघटन गर्न नसक्ने ती नेताको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्लो पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार नै दाहालले बोलेको बताउँछन् । ‘पार्टी बनाइछाड्छौं, पार्टीलाई फेर्न प्रतिबद्ध छौं भन्ने अर्थमा अध्यक्षले बोल्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले ठीक ढंगले काम गरेनौं, रूपान्तरण गरेनौं भने नेपाली क्रान्ति पछाडि पर्छ । तर, हाम्रो पार्टीले आफूलाई यथास्थितिबाट उठाउनुपर्छ । र, हामी रूपान्तरण गरिछाड्छौं भन्ने अर्थमा बोल्नुभएको हो ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
खनालको उपचारमा राज्यको ८१ लाख